Difaac guud – Windows – Vessoft
Bitdefender Antivirus Plus – waa shey abuur casri ah oo ka ilaaliya kombiyuutarkaaga khataraha ugu halista badan, ka hortag weerarada websaydhka, la dagaalanka musuqmaasuqa iyo keydinta xogta sirta ah.
Amniga Internetka ee ’Bitdefender’ – fayras leh difaac heerkiisu sareeyo oo ka dhan ah madaxfurashada, algorithms-ka casriga ah ee ka hortagga hanjabaadaha halista ah iyo gubashada si loo xakameeyo iskuxirka.
Dhiirigelintan ayaa waxay bixisaa ilaalin kobcin leh oo khaas ah internetka, taas oo ka hortagaysa isku dayga weerarrada inay xadaan xogta shakhsi ahaaneed.
Difaaca guud ee McAfee – mid ka mid ah hormuudiyaasha hormuudka u ah barnaamij-adda, kaas oo adeegsada xalka cusub ee hal-abuurka leh ee kahortagga fayrasyada kala duwan iyo hanjabaadaha shabakadda.
K7 – ka hortaga fayraska ee ka hortaga fayraska noocyada kala duwan, xannibaadda hanjabaadaha khadka tooska ah ee internetka iyo ogaanshaha dhibaatooyinka amniga ee nidaamka.
Tani waa noocyo badan oo amniga ah si loo ilaaliyo kombiyuutarkaaga ama server-kaaga ka horjoogsan hanjabaadaha shabakadaha iyo codsiyada aan amniga ahayn
Tani waa xal dhameystiran oo fayoobi ah oo loogu talagalay badbaadinta ugu badan, oo ay soo saareen shirkad si fiican loo yaqaan oo ku saabsan amniga macluumaadka.
G Xogta Amniga Guud – softiweer-ka wax-ku-oolka ah oo leh teknolojiyadda amniga sare iyo dhowr qalab oo dheeraad ah oo laga ilaaliyo fayraska iyo hanjabaadaha shabakadda.
Amniga Internetka ’G Data Internet Security’ – fayras leh fayras casri ah oo ilaaliya, teknolojiyadda ogaanshaha ee dabeecadda iyo oggolista amniga internetka.
Amniga Internetka F-Secure – softiweer waxaa loogu talagalay ilaalinta isticmaale internetka, kaas oo lagu gaaro iyada oo la xayiro boggaga internetka ee xaasidnimada ah, ilaalinta macaamil maaliyadeed iyo ka hortagga soo dejinta feylasha khatarta ah.